Home » Rules for Writers
1. မိမိစာနှင့် အနီးစပ်ဆုံးCategory (တခု)ကိုရွေးချယ်၍ပို့စ်တင်ပါ။ Tagထည့်ပါ။ Tagကို စာတလုံးစီကော်မာခံပြီးမှထည့်ပါ။
ဥပမာ – သတင်းဆိုလျှင် Newsကိုရွေးပါ။ နိုင်ငံရေးဆိုလျှင် Politic ကိုရွေးပါ။ ပွဲလမ်းသဘင်အလှူအတန်း၊သာရေးနာရေးဆိုလျှင် Event ကိုရွေးပါ။ တတ်နိုင်လျှင်တခုတည်းသာရွေးပါ။
Tag ထည့်ထားပါက နှစ်ကြာသွားသည့်တိုင် မိမိစာကို ပြန်ရှာဖွေရာတွင်လွယ်ကူစေပါသည်။ အတိုဆုံး အရေးအကြီးဆုံးစာလုံးတွဲများကို ကော်မာခံပြီးထည့်ပါ။ .ဥပမာ၊ “လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊အသားအရောင် ခွဲခြားမုန်းတီးမှုဖြစ်စေသော” ဆိုတဲ့စာကို Tag လုပ်မယ်ဆိုပါတော့။ လူမျိုးရေး, ဘာသာရေး, အသားအရောင်, ခွဲခြားမုန်းတီးမှု လို့လုပ်စေလိုတာပါ။Tagဟာ Search Engineတွေနဲ့တွဲပြီးလည်း အလုပ်လုပ်တာမို့နောက်နောင် နှစ်တွေကြာလည်း ရှာလွယ်ပါတယ်။
2. Titleကိုတိုတိုရေးပါ။ User အမည်တိုတိုရေးပါ။ စာမူရေးသားရာတွင် စာလုံးများကို Spaceခြားပါ။
တချို ့ခေါင်းစဉ်မတပ်မိပါဘူး၊ အဲဒါဆိုရင် ဖတ်လို့မရပါဘူး။ ခေါင်းစဉ်ပေးပါ။ မပေးတတ်ရင် ကိုယ့်စိတ်ထဲ အထင်ရှားဆုံးစာလုံးတတွဲကို ပေးလိုက်ပါ။ ခေါင်းစဉ်တပ်တာမှာ ဖတ်တဲ့သူစိတ်ဝင်စားမိအောင် ပေးတတ်ရင် စာရေး၊သတင်းရေးတတ်သူဖြစ်တာပါပဲ။ တိုတိုနဲ့လိုရင်းရေးမှ စာဖတ်သူက စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ အပိုဒ်လိုက်ကြီး ကူးမထည့်ပါနဲ့။
ဇော်ဂျီဖေါင့်ဟာ မခြားပဲရေးရင် အလိုအလျှောက်မဖြတ်ပေးပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် စာရေးတိုင်း စပေ့ခြားပေးပါ။ ဘယ်နေရာမှာစပေ့ခြားရမှန်းမသိရင် စာကိုအသံထွက်ရွတ်ကြည့်ပြီး အသံခဏရပ်တဲ့နေရာ စပေ့ဘားကို ရိုက်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ။ Space မရှိရင် စာက အတန်းလိုက်ကြီးရှည်နေတာမို့လူတွေဖတ်လို့လည်းမရပါဘူး။
ခေါင်းစဉ်တပ်တာ၊ စပေ့ပြန်ထည့်တာကို စာတင်သူက နောက်မှ Edit Tool သုံးပြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီမူရင်းစာကို စာမူတင်သူက ပြန်လည်တည်းဖြတ်နိုင်လို့ပါ။
စာရေးသူ(User)အမည်သည် သင်၏ကလောင်အမည်ဖြစ်သဖြင့် တိုတိုရေးပါ။ သင့်အကြောင်းကို Biographical Info မှာရှည်လျှားစွာရေးလို့ရပါတယ်။
3. မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကို သတိထားစစ်ဆေးပါ။
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတော့ မှားကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အလေ့အကျင့်လေးလုပ်ပြင်စေချင်တာပါ။ ပွိုင့်မလျှော့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မှားတာတွေ့ရင် အောက်မှာ အမှန်သိသူက ကောမန့်နဲ့ပြင်ပေးစေလိုပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ မြန်မာစာမမေ့မလျှော့အောင် သတ်ပုံမမှားအောင် လုပ်ကြတာပေါ့နော။
4. ပြည်ပမြန်မာမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများကူးတင်ခွင့်မရှိ။
အဲဒီမီဒီယာတွေက တိုင်လို့ပါပဲ။ သူတို့က သူတို့စာတွေသတင်းတွေကို အပင်ပန်းခံလိုက်ထားပြီး ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်က ခိုးတင်တယ်ပြောပါတယ်။ ဒါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး မန္တလေးဂေဇက်အနေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းပန်ရပြီပါပြီ။ အဲဒါကြောင့် ဘယ်အကြောင်းနဲ့မှ ကူးမတင်ကြဖို့ပါပဲ။
ပြည်တွင်းက မြန်မာတချို့က အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ပိတ်ထားတာမို ့တိုက်ရိုက်ဖက်ကြည့်လို့မရပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ သတင်းထူးဆိုတယောက်ယောက်ကစပြီး အီးမေးလ် နဲ့ပို့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတပါတ်လည်လာပြီး forwarded email မှရသည်ဆိုပြီတင်တာလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လည်း တခြားဝက်ဘ်ဆိုက်က အမည်တပ်ပြီ မန္တလေးဂေဇက်ကို သူခိုးအားပေးမီဒီယာ ပြောတာရှိပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းတွေကြောင့် သူများစာတွေ ကူးမတင်ကြဖို့ သတိထားကြပါ။
အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတခုခုကြောင့် ကူးတင်မှဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဆိုင်ရာမီဒီယာကို ကြိုခွင့်ပြုချက်တောင်းကြစေလိုပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက်ရထားပါကြောင်းပါ တပါတည်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
5. သတင်း၊စာမူတွင် မှီငြမ်းကိုးကားခြင်း၊ ဘာသာပြန်ခြင်းပါက မူလSourceနှင့် မူရင်းစာတပိုဒ်ကိုဖော်ပြရန်။
သတင်းတွေ ၃-၄ခုလိုက်ဖတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်သတင်းတပုဒ်ဖန်တီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်မြင်တာကိုပါပေါင်းထည့်နိုင်တာပေါ့။ အဲဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုရင် မှီငြမ်းတဲ့ စာတွေ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေကို ခရက်ဒစ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတပါးရဲ့လုပ်အားနဲ့အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။
ဘာသာပြန်ဆိုရင် အပေါ်ကနေ မြန်မာလိုပြန်ပြီး အောက်မှာ မူရင်းသတင်းကို တဝက်ဖြစ်ဖြစ် အကုန်လုံးဖြစ်ဖြစ် ခရက်ဒစ်လင့်နဲ့တကွ ဖေါ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ လူမျိုးစုတွေရာနဲ့ချီပြီး အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြတာပါ။ ဒါကြောင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေကို တန်းတူညီမျှစိတ်ထား ရေးကြဆွေးနွေးကြရန်ဖြစ်ပါတယ်
ကမ္ဘာကြီးမှာလည်း လူမျိုးပေါင်းစုံ ၊ဘာသာပေါင်းစုံ နေကြ၊ ကိုးကွယ်ကြတာပါ။ လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး၊ အသားအရောင် ခွဲခြားဆက်ဆံတာကို ပြင်းထန်စွာရှုံ ့ချပါတယ်.။
တဦးတယောက်က တဦးတယောက်အပေါ် လူသားဆန်စွာ တန်းတူညီမျှစိတ်ထားစေလိုပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုယ်ခန္တာ၊အင်္ဂါ တခုခု ချို ့ယွင်းသူ၊ မတူညီသူတွေကိုလည်း နှိမ်ချဆက်ဆံရေးသားတာမျိုးလည်း ခွင့်မပြုပါ။
7. ဘာသာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော စာများ တိုက်ရိုက်ကူးမတင်ရ။
ကိုယ့်အယူအဆထည့်သွင်းပြီး ဆွေးနွေးရေးသားမယ်ဆိုရင် တင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အသိအမှတ်လည်းပြုပါတယ်။ ဘာသာရေး Category အောက်မှာရေးကြစေလိုပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ တရားတွေ၊ ဓမ္မတွေကို စာအုပ်တွေ။ တခြားဝက်ဆိုက်တွေကနေ အပိုဒ်လိုက်ကူးတင်နေတာမျို းခွင့်မပြုပါ။
8. ကိုယ်တိုင်ရေးစာ မဟုတ်သည်များမတင်ရ။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ မူရင်းဆောင်ပုဒ်ဟာ ဲ့ “မတူသော အတွေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်စာ ချရေးပါ” ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်စာ ခေါ်တဲ့..သူတပါးအတွေး၊အမြင်တွေ ကုူးယူဖေါ်ပြတာမျိုးမဟုတ်တဲ့ စာကိုချရေးကြစေလိုပါတယ်
ကိုယ်ပိုင်စာဆိုတာမှာ ကိုယ်တိုင်က ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပါရင် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တော်တော်ကြာကတည်းကရေးထားတဲ့စာတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်ကူးတင်နေတာမျိုးလည်း ခွင့်မပြုပါ။ အဲဒါတွေအတွက် ပွိုင့်ပြန်မချပေးနိုင်ပါ။
မန္တလေးဂေဇက်ဟာ ဝိကီပီဒီးယားမဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့် ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြပြီးသားစာတွေ အပုဒ်လိုက်ကူးတင်နေခွင့်မရှိပါ။
ကိုယ်တိုင်ရိုက် ဓါတ်ပုံများတင်နိုင်ပါတယ်။ အထဲမှာ ဘာတွေ။ ဘယ်သူတွေပါတယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်နေ့က.. ဘာကြောင့်ရိုက်တယ်ဆိုတာလေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ ပထမမျက်နှာစာကို လူထောင်ပေါင်းများစွာကြည့်နေတာပါ။ ဒါကြောင့်တဦးတည်းက တောက်လျှောက်ပို့စ်တွေ ဆက်မတင်ပါနဲ့။ တခြားသူတွေကို နေရာပေးပါ။
မန်ဘာတဦးဟာ တရက်လျှင် စာ၂ပုဒ်ထက်ပိုမတင်ရ။
နိုင်ငံရေးအရ အယူအဆမတူသူတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ တဦးနဲ့တဦး ဝါဒ၊သဘောတရားနဲ့ အချက်အလက်အခြေခံပြီး ပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ အယူအဆမတူလို့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တာမျိုးခွင့်မပြုပါ။
မသိမသာနဲ့ခနဲ့တာမျိုး၊ နှိမ့်ချပြောဆိုတာမျိုးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေအတွက် ဆုံးဖြတ်ရခက်ရင် အက်ဒ်မင်(သို့)မော်ဒရိတ်တာတဦးဦးမှ လူအများဆုံးဖြတ်ချက်တောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အများစု ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အားလုံးကလိုက်နာရပါမယ်။
တဦးနဲ့တဦး တောင်းပန်ခြင်း၊ ကြေအေးခြင်းဟာ အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ အစဉ်အလာလို့ မန္တလေးဂေဇက်က လက်ခံထားပါတယ်။ တဦးကတောင်းပန်လာရင် တဦးက စာနဲ့ကြေအေးပေးပါရင် အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပါထပ်ဖြည့်ပါရစေ။
10. မိမိတင်သည့်စာကို စာမူရှင်(တင်သူ)မှ တာဝန်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး အယ်ဒီတာ၊ အဒ်မင်တို့မှ တာဝန်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်တိုင်တင်သောစာများရဲ့ ကျိုးကြောင်းကောင်းဆိုးကို စာတင်သူက တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့စာကြောင့် အငြင်းပွားမှုတစုံတရာဖြစ်ရင် စာတင်သူကသာ ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အယ်ဒီတာ၊ အက်ဒ်မင်တို့မှ စာများကို ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်မတောင်းပဲ ပယ်ဖျက်၊စိစစ်၊ဖြတ်တောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်း စာတင်သူတိုင်းအသိအမှတ်ပြုထားရပါမယ်။ အကြောင်းပြခြင်းမရှိပဲလည်း ပယ်ဖျက်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ပုံမှန်မီဒီယာစည်းကမ်းအနေနဲ ့ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်ဒီတာအဖွဲ ့က ဖြတ်တောက်ပြင်ဆင်ပြီးတာကို စာမူရှင်က ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခွင့်မရှိတော့ပါ။
ထပ်နေသော ထပ်သွားသော ပို့စ်များကို ပယ်ဖျက်မှာဖြစ်ပြီး စာထပ်ခဲ့ရင် နောက်မှတင်သူက ပွိုင့်၁၆ဝ (၂ဆ) ပြန်အနှုတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
11. ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိခိုက်စေသော ပို့စ်၊ကော်မန့်များကို ကာယကံရှင်မှ အယ်ဒီတာထံ ကန့်ကွက်စာအီးမေးလ်ပေးပို့ပြီး ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုစေလိုသည်။
ကိုယ်တိုင်စာရေးတင်တာမှာ စာကြောင့်တဦးတယောက်ကနစ်နာနေပါရင် ကန့်ကွက်စာပို ့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော ပို့စ်တင်သူအား ပွိုင့်၁၀၀ဝ နှုတ်ပါမည်။
ပစ်စာသဘောမျိုး (သူတပါးနစ်နာအောင်လုပ်ကြံဇတ်လမ်းရေးသားခြင်းမျိုး)တင်လာရင် သိတဲ့သူတွေက ကော်မန့်နဲ့ရေးပေးကြစေလိုပါတယ်။ အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါကြောင်း။
12. ကော်မန့်များရေးသားရာတွင် မူရင်းအပေါ်မှစာနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုသာ ရေးသားရန်
ဖတ်သူများအကျိုးရှိနိုင်မည့် တခုခုကျန်စေသည်မျာ။ ဖတ်သူများအတွက် အကျိုးတစုံတရာရှိစေသည်များသာ ရေးသားရန်ဖြစ်သည်။
အဓိပါယ်ကင်းမဲ့သော အလာပ သလာပ စာများ၊ နေကောင်းကျန်းမာ မိတ်ဆက်စာများ၊ စာတိုလေးများမရေးကြစေလိုပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ် URL (၁)ခုထက်ပိုပါပါက အလိုအလျှောက် Spam တွင်းဝင်သွားတတ်ပါသဖြင့် အချိန်စောင့်မှ ပြန်ပေါ်လာတတ်သည်ကို သတိထားပါ။
စာဖတ်သူတွေဟာ ကော်မန့်တွေနဲ့ ရောထားတဲ့စာတွေကို တတ်နိုင်သလောက်ရေးသားဆွေးနွေးကြစေလိုပါတယ်။ ရေးသားနိုင်တဲ့ ကောမန့်အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားတာမရှိပါ။ သတင်းကတဆင့်သိတဲ့အသိအမြင်မှာ ကောမန့်ပါပေါင်းပြီးဖတ်ရင် လူအမျိုးမျိုးအမြင်တွေကြောင့် ကျန်စာဖတ်သူတွေအထူးတလည်ကို အသိအမြင်တိုးစေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့်စာကိုမဆို ကောမန် ့ရေးသားနိုင်ရန် ခွင့်ပြုထားရမည်။ Comment OFF မလုပ်ရ။
ကောမန်းများကိုအယ်ဒီတာများမှ အခါအားလျှော်စွာစစ်ဆေးနေမည်ဖြစ်ပြီး စည်းကမ်းနှင့်မညီ၍ဖျက်ခြင်းများအတွက်တခုလျှင် ပွိုင့်၂ဝ ပြန်အနှုတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ရွေးချယ်တဲ့စာမူရှည်များရှိရင်လည်း အဆိုပါစာမူအတွက် စာမူခသီးသန့်ချီးမြှင့်မှာဖြစ်ပြီး တပုဒ်အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀+ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတွေအလိုက် ဆိုင်ရာဒေသက မြန်မာလှုပ်ရှားမှုသတင်း အများဖတ်နိုင်အောင် တင်ပေးမဲ့ မြန်မာပြည်ပြင်ပနေသူမင်န်ဘာတွေအတွက် စံနစ်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကို သတင်းစာမှာလည်း ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြကြေငြာလိုက်ပါပြီ။
ဆိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပြည်နယ်တွေ၊ထိုမ်ဝမ်၊ ဂျပန်၊ စင်္ကာပူ၊ ထိုင်း၊ တရုတ်ပြည်၊ ဥရောပနိုင်ငံတွေ၊ ဩစတေးလျှစတဲ့.. နိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့ မြန်မာတွေ ကိုယ်နေထိုင်ရာဒေသ၊ မြို ့က မြန်မာနဲ့ဆိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ၊ သာရေး၊နာရေးသတင်းတွေ၊ လက်ကမ်းစာစောင်၊ ဓါတ်ပုံတွေကို မန္တလေးဂေဇက်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ တင်ပေးဖို့ပါ။ သတင်းထူးသိရတာနဲ့ အချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပေးကြစေလိုတာပါ။ အဲဒီတင်တဲ့စာတပုဒ်သတင်းတခုအတွက် မြန်မာ့ဂဇက်သတင်းစာမှာ ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြဖို့ ရွေးချယ်ခဲ့ရင် သတင်းစာမူခ ၅ဒေါ်လာပေးပါမယ်။
အဲဒီငွေကြေးဟာ ပမာဏမများပေမဲ့ သတင်းစာအနေနဲ့ တလကိုသတင်း ၂၀+ပုဒ်လောက်အထိ ဝယ်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။
ဒီငွေတွေကို ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပဲ ရံပုံငွေတခုအဖြစ် စုထားပါမယ်။ ရွေးချယ်တာနဲ့ စုဆောင်းရထားငွေကို အစဉ်အမြဲထုတ်ပြန်ပေးနေပါ့မယ်။တကမ္ဘာလုံးရောက်နေတဲ့ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်တာဖြစ်တာမို့ ပုံနှိပ်သတင်းစာအတွက်လည်း သတင်းတွေရမယ်။ ငွေပမာဏာတခုလည်း စုဆောင်းထားနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တလ ၂ဝပုဒ်ရွေးရင်ကို ၁၀ဝဒေါ်လာနှုန်းနဲ့ လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရံပုံငွေကို တနှစ်တနှစ် စုဆောင်းပြီး ယူအက်စ်မှာလုပ်တဲ့ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ကို တန်းပေးလိုက်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ ပြည်တွင်းက ငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့ စာထူးချွန်တဲ့ ကလေးတွေကို ဆုချရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်။ နာဂစ်၊ဂီရိလိုမုန်တိုင်းခံ ဒုက္ခသည်တွေကို လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ပြန်လှူတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဆေးရုံဆေးခန်း ဆေးလိုတဲ့လုနာတွေ လှူတာဖြစ်ဖြစ် တနှစ်တခါ မြန်မာပြည်တွင်းက (ဘာသာရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ )အသင်းအဖွဲ ့(သို့)နေရာတနေရာ ဒါမှမဟုတ် ပညာတော်သင်ဆု..ဒါမှမဟုတ်..တခုခု…ကို (အများဆန္ဒကောက်ခံပြီး) အားလုံးကိုယ်စား ငွေသားအနေနဲ့ လှူဒါန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရွေးချယ်မှုကိုလည်း စာဖတ်သူတွေအားလုံးက အများဆန္ဒနဲ့ မဲပေးရွေးချယ်တဲ့ နေရာကိုပဲ ပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပေးပို ့သူများက မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်း တိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးရှိမဲ့နေရာတွေလှူတန်းသူ အလှူရှင်တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီး သတင်းစာအနေနဲ့လည်း များစွာအဆင်ပြေမှာဖြစ်လို့ပါ။ စာဖတ်သူ မြန်မာတို့တတွေလည်း ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြန်မာတို့ရဲ့ သတင်းစုံစုံ သိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
CNN iReport ကြားဖူးကြမှာပါ။ အဲဒါမျိုး ပုံစံတူလည်း မန္တလေးဂေဇက်မှာ လုပ်ပါမယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က မြန်မာတွေ ထူးခြားတာလေးတွေ့ရင် ဓါတ်ပုံလေးရိုက်။ အက်ဆေးတိုလေးရေးပြီး တင်ပေးကြဖို့ပါ။ တင်တဲ့သူတွေဟာ CNN iReport လုပ်နည်းဟန်တွေအတု်င်းပဲ
(၃) မဟောင်းပဲ ကောင်းတဲ့သတင်းဓါတ်ပုံဖြစ်ရမယ်။
ဆိုတာလေးလိုက်နာပေးဖို့ပါ။ အဲဒီလို ပုံတွေကို သတင်းစာမှာ ဖေါ်ပြဖို့ရွေးရင်လည်း တပုံကို ၅ဒေါ်လာ ချီးမြင့်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ..အဲဒီငွေတွေကိုလည်း အပေါ်က ရံပုံငွေထဲ စုထည့်ပေးပါမယ်။
လှူဒါန်းပေးပို ့မှုတွေမှာ အလှူရှင်တွေအမည်နာမတွေနဲ့ ထုတ်ပြန်လှူဒါန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။